डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल, अस्पताल जान मानेनन् «
जुम्ला-चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै सत्याग्रह बसिरहेका डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको छ । विगतका वर्षमा हप्तांैसम्म पनि स्वास्थ्यमा खासै खराबी नदेखिने डा.केसीको यसपाली ६ दिनमै स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखिन थालेको छ । डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था निकै जटिल बन्दै गएकाले २४सै घन्टा रेखदेख गर्न सकिने सुरक्षित ठाउँमा यथाशीघ्र स्थानान्तरण गर्न चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् ।
अनसनको दोस्रो दिनदेखि नै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डाक्टर प्रविण गिरी, अनुपमंगल समालको टोलीले डा.केसीको स्वास्थ्य नियमित जाँच गरिरहेका छन् । अनसनको छैटौ दिन शनिवार विहान गरिएको जाँचमा डा.केसीलाई चक्कर लाग्ने, मुटुको चाल बढेको, मांसपेशी बाउँडिने, छाती दुख्ने, श्वासप्रश्वासमा गाह्रो हुने, पिसाबको मात्रामा कमी, रक्तचाप कम भइरहेको उपचारमा खटिएका डाक्टर प्रविण गिरीले बताए ।
उनले भने, “दिनमा तीनपटक सामान्य जाँच भइरहेको छ, रगतमा चिनीको मात्रालगायत अन्य जाँच गर्न अझै मानेका छैनन् । अनसन स्थलमा संक्रमणको खतरा भएकाले नशाबाट सलाइन दिन सम्भव छैन ।”
डा.केसीको जीवन रक्षाका लागि २४ घण्टाभित्र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुको विकल्प नरहेको डा. अनुपमंगल समालले बताए । ‘केसीलाई जतिसुकै वेला पनि जटिल स्वास्थ्य समस्या आउन सक्छ । रगतमा चिनीको मात्र अति न्यून भई प्रमुख अंगहरु बाउँडिने समस्या छ ।’ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुँदा संक्रमणको खतरा बढ्दै गएका कारण डा.केसीलाई चाँडै अस्पताल जान चिकित्सकको सुझाव छ ।
डा.केसीले भने आफ्ना माग पूरा नभएसम्म प्राण त्याग्नु परेपनि अनसन स्थलबाट कतै नजाने अडान गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको अबस्थामा चिकित्सकले तत्तकाल अस्पताल लिनुपर्ने सुझाब दिएपनि डा.केसीले भने माग पूरा नभएसम्म एक पाईला नचल्ने दाबी गरेका छन् । धर्मशालाको बरन्डामै अनसन बसिरहेकाले ६ दिनमै स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ ।
यसैबीच डा.केसीको सत्याग्रहको समर्थनमा नागरिक समाज, जुम्लाले हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गरेको छ । उनका माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिन हस्ताक्षर संकलन थालिएको नागरिक समाज, जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतले बताए । अभियान संचालन गरिएको दुई दिनमै ५ हजार बढी हस्ताक्षर संकलन भएको छ । केसीलाई समर्थन जनाउन साझा विबेकशील पार्टीका सातै प्रदेशका ईन्चार्ज जुम्ला पुगेका छन् ।
अस्पताल जान मानेनन्